February 2021 - Celegroup
ဒီေန႔ ပိုလုပ္ရင္ ေနာက္ေန႔ ပိုရမယ္
February 28, 2021 Celegroup1975 0
ဒီေန႔ ပိုလုပ္ရင္ ေနာက္ေန႔ ပိုရမယ္ ရတဲ့ဝင္ေငြထက္ အလုပ္ပိုလုပ္ရတဲ့သူကမၾကာပါဘူးအလုပ္လုပ္ရတာထက္ ဝင္ေငြေတြပိုရလိမ့္မယ္ဘယ္အရာမဆို အလကားဆိုတာမ႐ြိပါဘူးကိုယ္လုပ္ေပးတဲ့အရာေတြက အခ်ိန္တန္ရင္ကိုယ့္ကိုျပန္ၿပီးေက်းဇူးဆပ္ပါလ္ိမ့္မယ္ ခ်ီးက်ဴးခံရတဲ့သူက သူတို႔ရတာထက္ပိုလုပ္တဲ့သူေတြပါပဲဒါေပမဲ့ ကိုယ္ျပန္ရတဲ့အရာက ေငြေတြျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္အခြင့္အေရးေတြျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္ အခြင့္အေရးမဟုတ္ပဲ သင္နဲ႔သက္ဆုံးတိုင္အတူရွိေနမယ့္Skill ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ Mindset ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ဒီေန႔သူမ်ားအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ခ်ိန္မွာရတဲ့ဝင္ေငြထက္ ပိုလုပ္ေပးေနတယ္ဆိုရင္ ေနာက္ေန႔သင့္ရဲ႕စီးပြားေရးထဲမွာမထင္မွတ္တဲ့အက်ိဳးရလာဒ္ေတြ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္ဒါေၾကာင့္ဒီေန႔ ပိုလုပ္ရင္ ေနာက္ေန႔ ပိုရမယ္သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစNann Yu Yu Htwe Credit. ေအာင္ျမင္သူဘယ္လိုေတြးလဲ? :Black Bin Myanmar unicode ဒီနေ့ ပိုလုပ်ရင် […]
ငွေကြေး အဆင်ပြေစေသော ဂါထာ သို့မဟုတ် ကိုယ်တွေ့ ဒိဝါတပတိဂါထာ တန်ခိုး
“ကျွန်တော် ရောင့်ရောင့်ရဲရဲနဲ့ နေတာမှားသလား ?အများကြီးမရှာနိုင်တော့ ကျွန်တော်နဲနဲ ပဲသုံးတယ် ကားမဝယ်နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော် BUS ကားစီးနိုင်တယ်။ရောက်တာချင်းတူတူပဲအိမ်မဝယ်နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော် တိုက်ခန်းအဟောင်းမှာ ငှားနေနိုင်တယ်။ မိုးလုံတာချင်းတူတူပဲ ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာ မစားနိုင်လဲ ကျွန်တော်လမ်းဘေးက ထမင်းဆိုင်စားလို့ရတယ်။ပိုက်ပြည့်တာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် နေ့တိုင်း မိသားစု ၊ကျွန်တော် သားသမီးနဲ့ ပျော်ရွင်မှု ရှိတယ်ကျွန်တော် ဒီလိုနေတာမှားလား ?ကျွန်တော် အောင်မြင်အောင်ရည်မှန်းချက်မချတာ မှားလား ? ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်မကြိုးစားချင်တာမှားလားဗျ ?အောင်မြင်သူဘယ်လိုတွေးလဲ Page ကဆိုတော့ကျွန်တော်ကို […]
ကျွန်တော် ရောင့်ရောင့်ရဲရဲနဲ့ နေတာမှားသလား ?
” အချိန်တစ်ရက် ဒေါ်လာတစ်သန်း “
” အချိန်တစ်ရက် ဒေါ်လာတစ်သန်း ” လူတစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတဲက ပိုက်ဆံကို မစားရက် မသောက်ရက် စုဆောင်းတယ်။ အသက် ၄၀ ပြည့်တဲ့အခါ သူ့လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာ တစ်သန်းစုမိနေပြီ။ သူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိတ်ပြီး ကြိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကလည်း သဘောတူလို့ မနက်ဖြန်မှာ လက်ထပ်ကြတော့မယ်။ တစ်သက်လုံး စုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူ့ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ နေသွားတော့မယ်ဆိုပြီး သူဟာ အရမ်း ပျော်နေတယ်။ အရမ်းပျော်ပြီး […]
ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမယ့္ဆင္းရဲသားစိတ္ဓာတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ လိုအင္ဆႏၵေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်စ္စစ္ကို ေတြ႕ရွိရဖို႔ကေန ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားဖို႔ အထိ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ တြဲဖက္ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ ဒီလိုေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာမွာ ရွင္းထုတ္ပစ္ရမယ့္ အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲသားစိတ္ဓာတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္နဲ႔ အေတြးအေခၚေတြအားလုံးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘဝအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အေတြးအေခၚေတြက ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အဟန႔္အတားျဖစ္ေစပါတယ္။ […]
Facebook က ထိုးတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ….
February 27, 2021 Celegroup1975 0
Facebook က ထိုးတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ ညီမလေးရေFb ပေါ် တစ်စုံတရာကြောင့် မျက်ရည်စိုရွှဲ ဝမ်းနည်းနေရသလားကွာSocial Media ဆိုတာကောင်းတာတွေ အကျိုးအတွက်စံစားနိုင်ပေမယ့် မကောင်းတာတွေ အတိုးနဲ့ ခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။ ကောင်းတာတွေ ခွဲစစ်ပြီးမကောင်းတာတွေ ဝဲပစ်ဖို့ပါ။ညီမလေး ရဲ့ PostLike ပေးမယ့်သူ ရှားပါးအားလျော့နေသလားကွယ် တန်ခိုးထွားတဲ့ အရေမရ အဖတ်မရ post နဲ့ အကျိုးများမယ့် ရိုးသားတဲ့ အရေရ အဖတ်ရ postဒီနှစ်ခုမှာLike တန်ဖိုးက မိုးနဲ့မြေကွာပါသတဲ့။Like တစ်ထောင်ရလို့ […]
ဘဝနေနည်း နည်းလမ်း ( ၁၀ )မျိုးကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ
ဘဝနေနည်း နည်းလမ်း ( ၁၀ )မျိုးကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ ( ၁ ) ဘယ်တော့မှ ပိုက်ဆံမချေးပါနဲ့ ။ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုရှိတယ် ။ တောင်းမှပေးတာ လူမိုက်မတောင်းဘဲပေးတာ လူလိမ္မာတောင်းလည်းမပေးတာ လူယုတ်မာဒါ့ကြောင့် ပြင်ပဘေးသူစိမ်းတွေနဲ့မယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုတက်နိူင်သမျှပိုက်ဆံမချေးပါနှင့် ။ငွေကြေးဥစ္စာဟာ နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေ ချေးငှားကြသူတိုင်းဟာ ပြန်ပြီးလိုချင်ကြစမြဲပါ ။ပြန်မဆပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲလေးတည်နေတတ်ပါတယ် ။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ရက်ရက်ရောရောသာ ပေးကမ်းကူညီပေးလိုက်ပါ ။ ( ၂ ) လိုအပ်လျှင်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပိုက်ဆံပုံမှန်စုပါ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်အချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံမလဲဘယ်အချိန်မှာ […]
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစု ဆင်းရဲနေကြသလဲ???
၁ မိနစ် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ရအောင် မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်၊ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစု ဆင်းရဲနေကြသလဲကောင်းလိုက်တဲ့ မေးခွန်း။ဒါကို ပညာရှင်တစ်ယောက်က ဒီလို ဖြေသွားပါတယ်။မြန်မာအများစုက ( TEAM WORK ) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ်ဘူး။ ဘေးက နေ သွေးခွဲရလွယ်တယ်။မနာလိုစိတ် များတယ်။အချင်းချင်းထဲ ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာ မလိုလားဘူး။သာရင်လည်း မနာလိုဘူး။သူများကို ချီးကျူးရင် မကြိုက်ဘူး ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချီးကျူးစေချင်တယ်။မုဒိတာ မပြါးနိုင္ဘူး။ကြိုးစားရမယ့်နေရာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။သူများမလုပ်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး။အ ချောင်ခိုချင်တယ်။ပိုက်ဆံရရင် […]
ရိုးသားခြင်း၏ရလဒ် တစ်ခါကသူတောင်းစားမလေးတစ်ဦး လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ တောင်းစားနေပါတယ်။သူ့ခွက်ထဲမှာလည်း အကြွေစေ့တချို့နဲ့ငွေစက္ကူစ အသေးလေးတွေ ရှိနေပြီမို့မိုးမချုပ်ခင် အိမ်ပြန်မယ်လို့သူကတွေးနေလိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ပိုက်ဆံရှိ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးက သူမထံရောက်လာပြီးနံပါတ်နည်းနည်းကြီးတဲ့ အကြွေစက္ကူနှစ်ရွက်ကို ပစ်ချသွားပါတော့တယ် ။ အမျိုးသမီးကြီး ငွေစက္ကူ ထည့်သွားချိန်မှာသူ့ခွက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ခု ပြုတ်ကျသံကိုအသံတစ်သံ ထွက်သွားပေမဲ့ ကားသံစကားပြောသံ အကြွေစေ့သံတွေကြောင့်အဲဒီအသံကို သူတောင်းစားမလေးရောပိုက်ဆံထည့်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးပါသတိမပြုမိလိုက်ပါဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ညနေသာ စောင်းသွားတယ်။နောက်ထပ်ပိုက်ဆံထည့်တဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့တာမို့ သူတောင်းစားမလေးဟာအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတော့တယ် ။ အိမ်ရောက်တော့ သူတစ်နေ့တာတောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကို ရေတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အံ့သြဝမ်းသာစရာအဖြစ်ပျက်ကြီး […]
Mr.Beanက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ
Mr.Beanက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ ” အေဖေျပာခဲ့ဖူးတယ္။မင္းကလူေတြကိုရယ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တာကိုဟုတ္လွၿပီထင္မေနနဲ႔မင္းကိုလူေပါတစ္ေယာက္လိုသူတို႔ၾကည့္ၿပီးဟားေနတာကိုမင္းကဂုဏ္ယူေနတာ” ” ဒီစကားက ကြၽန္ေတာ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားဘဝမွာ အရမ္းေတြေဝေစခဲ့တယ္။လူေတြရယ္ေအာင္လုပ္ရတဲ့လူတိုင္းက တကယ္ပဲလူေပါလား လို႔ကြၽန္ေတာ္ေတြးခဲ့ဖူးတယ္။ေသနတ္ခါးၾကားညႇပ္ၿပီး အမိန႔္ေပးတတ္တဲ့လူေတြက် လူေတြက မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းနဲ႔အေလးျပဳေလးစားတတ္ၾကၿပီးလူေတြကို ရယ္ေအာင္လုပ္တဲ့လူေတြက်ဘာလို႔လူေပါျဖစ္ရတာလဲ။အၿပဳံးေတြထက္ အမိန႔္ေတြ အာဏာေတြကလူေတြအတြက္ အထင္ႀကီးစရာျဖစ္ေနလို႔လားဗ်ာ” Mr.Bean ” မင္းဘာမွမလုပ္ရင္ဘယ္သူမွမင္းကိုမသိဘူးမင္းလုပ္လို႔မင္းမွာရစရာ၄ခုပဲရွိမယ္။ေလွာင္ေျပာင္မႈအျပစ္တင္မူေလးစားမႈမနာလိုမႈမင္းကေကာင္းတဲ့အလုပ္လုပ္ခဲ့တာေတာင္ဒီ၄ခုလုံးရခဲ့ရင္ မင္းေအာင္ျမင္လို႔ပဲ ” Mr.Bean သူ႔ပန္းတိုင္ကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ ယိုင္လဲေစတာေတြကို သူ႔အေတြးနဲ႔သူ ျပန္တြန္းလွန္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒီစကားရပ္ေတြကို ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္…။ဒါေၾကာင့္ သူ႔ ပန္းတိုင္ေလွ်ာက္မယ့္ ေျခေထာက္ေတြကို ပိုၿပီး […]